274s KT McFarland သည်ဂျွန်ကယ်လီ၏ Trump အပေါ်ဝေဖန်မှုများကိုတုံ့ပြန်သည် images and subtitles
ဝါရှင်တန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လူများ။ "ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားဤအရာကိုသင့်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားဤအရာကိုသင့်အားအကြံပေးမည် အိုင်တီသင်နှင့်သင့်ရှိရန်ကောင်းပါတယ်။ အိုင်တီသင်နှင့်သင့်ရှိရန်ကောင်းပါတယ်။ သောအတွေးအခေါ်နှင့်အတူစတင်ကြပါစို့ ၈ - ဒီအတွေးအခေါ်နဲ့စကြစို့။ ဒီနေရာမှာဂျွန်ကယ်လီ၊ 8 - ဤအချက်၌, ဂျွန်ကယ်လီ, တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲတွင်သူဖြစ်ခဲ့သည် သူအဲဒီမှာရှိ၏တစ်နှစ်နှင့်တစ်ဝက် - ဆန့်ကျင်လာနေသည် ဒီနေရာမှာ - ထွက်ကြွလာသူသမ္မတမဟုသူကပြောသည် သမ္မတကသူမပြောသည့်အုတ်တံတိုင်းနံရံ၊ ဘလမ်၊ WALL, BLA, BLA, BLA ၌ယုံကြည်ရမည်။ Blah ။ ဒီအကြောင်းဒီနည်းကိုဘာလဲ ဒီဥက္ကID္ဌအကြောင်းဘာလဲ - သင်ရှင်းပါတယ် သမ္မတ - သင်ဒီဟာကိုအလွန်ထူးကဲကောင်းမွန်သောခြွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် - ဒီနည်းကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခြွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူတို့ပြောနေတာတွေကိုပြောဆိုခြင်း သူတို့ကဲ့သို့သောစကားပြောကျွမ်းကျင်သူနှင့်ရွေးကောက်တော်မူသောလူ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လူများကသူတို့ကိုဒီနည်းကိုသမ္မတထက်ရွေးချယ်။ သူတို့ကဒီနည်းကိုသမ္မတ။ >> ငါအဘို့အများကြီးရှိသည် >> ငါအထွေထွေကယ်လီများအတွက်လေးစားမှုရှိသည်။ အထွေထွေကယ်လီ။ သင်နှင့်အတူသဘောမတူလျှင်ပန်းတိုင် ဒါပေမဲ့သမ္မတကိုသဘောမတူရင်ဘာကြောင့်ယူတာလဲ သမ္မတဘာကြောင့်ယောဘကိုဘာကြောင့်ပထမဆုံးခေါ်ယူခဲ့တာလဲ။ ပထမနေရာ၌ယောဘ။ သင်တစ် ဦး အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ထပ်ထည့်ပါ သမ္မတတစ် ဦး အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ကိုသင်ထည့်ပြီးပြီ၊ သမ္မတကြီး၊ ခင်ဗျားကသမ္မတကြီးကချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ် သမ္မတနှင့်လူမျိုးတော်၏ကြီးမားသောဂုဏ်အသရေ။ လူမျိုး။ ငါသည်သင်၌ရှိသည်ထင် သင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် သင်၏တောင်ကိုပိတ်ထားရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ Mout Shut ။ အကယ်၍ သင်စိတ်ပျက်မိလျှင် သင်မူဝါဒအပေါ်စိတ်ပျက်စရာရှိပါက။ မူဝါဒ သူ NSC နှင့်ထွက်လာတဲ့အခါ သူ NSC ကောင်လေးနဲ့ထွက်လာတဲ့အခါဘာမှမမြင်ရဘူး။ GUY, အိုင်တီမမြင်ရပါဘူး။ Lou: VINDMAN Lou: VINDMAN 'S ယောဟန်သည် John Bolton သွားကြကုန်အံ့။ 'S ယောဟန်သည် John Bolton သွားကြကုန်အံ့။ သူဒီနည်းကိုတွစ်တာ။ သူဒီနည်းကိုတွစ်တာ။ ဂျွန်ကယ်လီဘောလ်တန်ကပြောပါတယ် ဘောလ်တန်ဂျွန်ကယ်လီကဂုဏ်အသရေရှိသူဖြစ်တယ်။ ဂုဏ်အသရေလူ။ ယောဟန်နှင့်ငါအချိန်များတွင်စိတ်ပျက် ဂျွန်နဲ့ကျွန်တော်ဟာကွာရှင်းပြတ်စဲတဲ့အချိန် - KISS ဘယ်အချိန်မှာစိတ်ဓာတ်မကျခဲ့ဘူး KISS - သူသည် COMMONPLAC ဖြစ်သည့်တိုင်းပြည်အားအစေခံသည် အစဉ်အမြဲမိမိနိုင်ငံကိုသစ္စာရှိရှိအမှုဆောင်ခဲ့သည်။ သစ္စာရှိရှိ။ အကျိုးဆက်ကပြောပါတယ်တစ် ဦး အကျိုးဆက်ကပြောတယ်ရှိသည်ဆိုပါကငြင်းပယ်ရန်တာဝန်ရှိသည် သူ့ကိုအခြေမခံသောတိုက်ခိုက်မှုများကိုငြင်းပယ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ သူ့ကို ON BASELESS တိုက်ခိုက်။ ငါဖို့ထောက်ပြချင်တယ် ပရိသတ်ကိုထောက်ပြချင်တယ်။ ပရိတ်သတ်။ အိုင်တီစိတ်ဝင်စားဖို့လှည့် အိုင်တီအိုင်တီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လှည့်လည်အဲဒီမှာ။ ယောဟနျအဲဒီမှာ။ သူသိတယ်သူအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် သူအသိအမှတ်ပြုသူကယ်လီနှင့်အတူစိတ်ပျက်ခဲ့ပေမယ့်သူ ကယ်လီနှင့်အတူစိတ်ပျက်အားငယ်ပေမယ့်သူကမသန်စွမ်းသူများကိုရည်ညွှန်းသည် ဂျွန်ကယ်လီနှင့်အတူသဘောမတူသောသူတို့အားရည်ညွှန်းသည်။ ယောဟနျကယ်လီနှင့်အတူ။ သူလှည့် CUTE အနည်းငယ်ကြည့်ပါ သူလှည့်အထှေးလှည့်ကြည့်ကြည့်ပါအဲဒီမှာ? အဲဒီမှာလုပ်? ဒီနည်းကို BS နှင့် NONSENSE IS ဤသည်နက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်နှင့် THE ထံမှ BS နှင့် NONSENSE IS နက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်မှစ။ ငါ '' သော BUREAUCRACY ငါမုန်းသော BUREAUCRACY တွင်ပါ။ မုန်းတယ် သူတို့က WORD GAMES ကစားတယ် သူတို့ကစကားလုံးဂိမ်းများကိုကစားသည်လူတိုင်းသည်ထူးခြားသောစကားတစ်ခွန်းဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည်ထူးခြားသောစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သောအံ့သြဖွယ်, တစ် ဦး ကာကွယ်ရေး သောအံ့သြဖွယ်, တစ် ဦး အတွက် operating KELLY ၏ကာကွယ်ရေး သမ္မတကယ်လီအတွက်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နေသည် သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိသောနည်းလမ်း။ သူအမှုဆောင်ခဲ့သည်။ >> 63 သန်းအမေရိကန်မဲပေးကြသည် >> သမ္မတ 63 သန်းအမေရိကန်မဲပေးကြသည်။ သမ္မတအဘို့။ သူကနိုင်ငံခြားမူဝါဒချမှတ်။ သူကနိုင်ငံခြားမူဝါဒချမှတ်။ မ CAREER တစည်း တောင်မှစစ်မှုထမ်းမဟုတ်တောင်မှအလုပ်အကိုင် BUREAUCRATS တစည်း။ ပင်စစ်မှုထမ်းမဟုတ် BUREAUCRATS ။ သူတို့ကျိန်ဆိုရန်ရှိသည် သူတို့ခုခံကာကွယ်ဖို့ပြောရုံးခန်းယူကြပြီ ပြောဆိုရန်ရုံးသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုခုခံကာကွယ်။ သူတို့အလုပ်လုပ်ကြသည် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သူတို့သည်သမ္မတအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သမ္မတ။ သူဘာလုပ်လုပ်သူတို့ချမှတ်တဲ့မူဝါဒ သူဘာလုပ်လုပ်မူဝါဒချမှတ်ရန်သူတို့နောက်သို့မလှည့်ပါ သူ့နောက်ကိုမလှည့်သင့်ဘူး နှင့်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာဘာလဲ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကောင်စီဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ ကောင်စီ DID ။ Lou: ရောဘတ်အိုဘရိုင်ယန်ရပ်နေတယ် Lou: ရောဘတ်အိုဘရိုင်ယန်ဒီသတင်းကိုဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပါတယ် ဒီနည်းကိုအဘို့အတက်လာဒီသမ္မတ, အလုပ်လုပ်။ Hard ။ သမ္မတကယ်လီအပေါ်နှစ်ဆ၊ သမ္မတအတွက်ကယ်လီအပေါ်နှစ်ဆယ့်တစ်မျိုး၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဒီနည်းကိုချနိုင်ခဲ့တယ် ငါတို့အဘို့ဤချထားနိုင်လျှင်။ ပရိတ်သတ်။ ငါဂျွန်ကယ်လီအဆုံးသတ်ခဲ့သည် ငါ John KELLY အဆုံးသတ်သောအခါငါအလျင်အမြန်မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး။ ငါအလျင်အမြန်မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး။ သူအပြည့်အဝသိတယ်သူလမ်း သူသည်အပြည့်အဝသိတယ်မိမိလမ်းကိုကျော်မိမိလမ်းပေါ်မှာမိမိခေါင်း။ သူ၏ ဦး ခေါင်းကိုကျော်။ ဤသူကားအဘယ်သူသမ္မတ ဤသူသည်မကြာသေးမီကပြောကြားခဲ့သည့်သူ၏အကြီးမားဆုံးသောနောင်တဖြစ်သည် မကြာသေးမီကသူ၏အကြီးမြတ်ဆုံးနောင်တရပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်း AND ငါသူကြီးစဉ်းစားပါ ငါသူသည်ကြီးမြတ် Self- အသိပညာနှင့်အသိပညာရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုမိနှင့်ဤစကားကိုပြောရန်အသိပညာ။ ပြောပါ။ >> ငါတို့အကူးအပြောင်း၌ရှိကြ၏ >> ငါတို့အသွင်ကူးပြောင်းမှု၌ရှိကြ၏အခါအစောပိုင်းနေ့ရက်ကာလ၌ အကူးအပြောင်း၏အစောပိုင်းနေ့ရက်များ။ ကူးပြောင်းရေး။ ငါသူတို့သဘောပေါက်မစဉ်းစားပါနဲ့ ငါသူတို့လမ်းလျှောက်သွားနေကြသည်ကိုမြင်ဘူဇသူတို့သဘောပေါက်လာတယ်ထင်ကြဘူး BUZZ သူတို့သွားကြသည်ကိုမြင်လျှင်သို့လမ်းလျှောက်။ ထဲသို့။ သူနဲ့တူတယ် ကျနော်တို့ ALIEN ကျူးကျော်စစ်တပ်ကဲ့သို့ဆက်ဆံခဲ့သည်။ တပ်မတော်ကျူးကျော်။ Lou - ဒီနည်းလမ်းကိုဘယ်သူကကုသပေးခဲ့တာလဲ။ Lou - ဒီနည်းလမ်းကိုဘယ်သူကကုသပေးခဲ့တာလဲ။ >> ဝါရှင်တန် BUREAUCRACY ။ >> ဝါရှင်တန် BUREAUCRACY ။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ။ Lou - မင်းပြောနေတာ LOU: သင်ကအဖြူရောင် ၀ န်ထမ်းတွေကိုပြောနေတယ် အဖြူရောင်အိမ်ပါ ၀ န်ထမ်းများရုံး။ အိမ်။ >> အမြဲတမ်း BUREAUCRACY >> မီးသို့မဟုတ်ပင်မရနိုင်သောအမြဲတမ်းEAရာဝတီ မီးသို့မဟုတ်ပင်လွှဲပြောင်းနိုင်သလား။ လွှဲပြောင်းခြင်း။ သူတို့ကသမ္မတကြည့်ရှုခြင်းနှင့် သူတို့ကသမ္မတကိုကြည့်ပြီးပြောပါမယ် သင်ဒီမှာပြီးနောက်ကြာလိမ့်မယ်ပြောပါ။ သွားပြီ Lou - သူတို့ဖြစ်နိုင်မယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိလိမ့်မယ်
KT McFarland သည်ဂျွန်ကယ်လီ၏ Trump အပေါ်ဝေဖန်မှုများကိုတုံ့ပြန်သည်
< start="0.668" dur="5.271"> ဝါရှင်တန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လူများ။ "ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားဤအရာကိုသင့်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ >
< start="5.94" dur="2.335"> ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားဤအရာကိုသင့်အားအကြံပေးမည် အိုင်တီသင်နှင့်သင့်ရှိရန်ကောင်းပါတယ်။ >
< start="8.276" dur="3.902"> အိုင်တီသင်နှင့်သင့်ရှိရန်ကောင်းပါတယ်။ သောအတွေးအခေါ်နှင့်အတူစတင်ကြပါစို့ >
< start="12.213" dur="3.535"> ၈ - ဒီအတွေးအခေါ်နဲ့စကြစို့။ ဒီနေရာမှာဂျွန်ကယ်လီ၊ >
< start="15.783" dur="2.602"> 8 - ဤအချက်၌, ဂျွန်ကယ်လီ, တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲတွင်သူဖြစ်ခဲ့သည် >
< start="18.386" dur="2.001"> သူအဲဒီမှာရှိ၏တစ်နှစ်နှင့်တစ်ဝက် - ဆန့်ကျင်လာနေသည် >
< start="20.388" dur="2.401"> ဒီနေရာမှာ - ထွက်ကြွလာသူသမ္မတမဟုသူကပြောသည် >
< start="22.79" dur="3.069"> သမ္မတကသူမပြောသည့်အုတ်တံတိုင်းနံရံ၊ ဘလမ်၊ >
< start="25.86" dur="0.299"> WALL, BLA, BLA, BLA ၌ယုံကြည်ရမည်။ >
< start="26.16" dur="2.735"> Blah ။ ဒီအကြောင်းဒီနည်းကိုဘာလဲ >
< start="28.929" dur="1.801"> ဒီဥက္ကID္ဌအကြောင်းဘာလဲ - သင်ရှင်းပါတယ် >
< start="30.765" dur="2.635"> သမ္မတ - သင်ဒီဟာကိုအလွန်ထူးကဲကောင်းမွန်သောခြွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် - >
< start="33.434" dur="1.801"> ဒီနည်းကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခြွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူတို့ပြောနေတာတွေကိုပြောဆိုခြင်း >
< start="35.269" dur="1.534"> သူတို့ကဲ့သို့သောစကားပြောကျွမ်းကျင်သူနှင့်ရွေးကောက်တော်မူသောလူ >
< start="36.804" dur="2.101"> ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လူများကသူတို့ကိုဒီနည်းကိုသမ္မတထက်ရွေးချယ်။ >
< start="38.939" dur="5.205"> သူတို့ကဒီနည်းကိုသမ္မတ။ >> ငါအဘို့အများကြီးရှိသည် >
< start="44.178" dur="1.134"> >> ငါအထွေထွေကယ်လီများအတွက်လေးစားမှုရှိသည်။ >
< start="45.346" dur="3.036"> အထွေထွေကယ်လီ။ သင်နှင့်အတူသဘောမတူလျှင်ပန်းတိုင် >
< start="48.416" dur="1.701"> ဒါပေမဲ့သမ္မတကိုသဘောမတူရင်ဘာကြောင့်ယူတာလဲ >
< start="50.118" dur="2.168"> သမ္မတဘာကြောင့်ယောဘကိုဘာကြောင့်ပထမဆုံးခေါ်ယူခဲ့တာလဲ။ >
< start="52.287" dur="1.6"> ပထမနေရာ၌ယောဘ။ သင်တစ် ဦး အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ထပ်ထည့်ပါ >
< start="53.889" dur="2.4"> သမ္မတတစ် ဦး အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ကိုသင်ထည့်ပြီးပြီ၊ >
< start="56.291" dur="2.635"> သမ္မတကြီး၊ ခင်ဗျားကသမ္မတကြီးကချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ် >
< start="58.927" dur="0.799"> သမ္မတနှင့်လူမျိုးတော်၏ကြီးမားသောဂုဏ်အသရေ။ >
< start="59.761" dur="0.899"> လူမျိုး။ ငါသည်သင်၌ရှိသည်ထင် >
< start="60.695" dur="2.201"> သင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် >
< start="62.897" dur="0.933"> သင်၏တောင်ကိုပိတ်ထားရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ >
< start="63.832" dur="2.668"> Mout Shut ။ အကယ်၍ သင်စိတ်ပျက်မိလျှင် >
< start="66.501" dur="0.533"> သင်မူဝါဒအပေါ်စိတ်ပျက်စရာရှိပါက။ >
< start="67.068" dur="3.67"> မူဝါဒ သူ NSC နှင့်ထွက်လာတဲ့အခါ >
< start="70.739" dur="1.334"> သူ NSC ကောင်လေးနဲ့ထွက်လာတဲ့အခါဘာမှမမြင်ရဘူး။ >
< start="72.107" dur="5.604"> GUY, အိုင်တီမမြင်ရပါဘူး။ Lou: VINDMAN >
< start="77.713" dur="5.237"> Lou: VINDMAN 'S ယောဟန်သည် John Bolton သွားကြကုန်အံ့။ >
< start="82.951" dur="2.201"> 'S ယောဟန်သည် John Bolton သွားကြကုန်အံ့။ သူဒီနည်းကိုတွစ်တာ။ >
< start="85.153" dur="3.102"> သူဒီနည်းကိုတွစ်တာ။ ဂျွန်ကယ်လီဘောလ်တန်ကပြောပါတယ် >
< start="88.256" dur="0.566"> ဘောလ်တန်ဂျွန်ကယ်လီကဂုဏ်အသရေရှိသူဖြစ်တယ်။ >
< start="88.823" dur="2.135"> ဂုဏ်အသရေလူ။ ယောဟန်နှင့်ငါအချိန်များတွင်စိတ်ပျက် >
< start="90.992" dur="7.674"> ဂျွန်နဲ့ကျွန်တော်ဟာကွာရှင်းပြတ်စဲတဲ့အချိန် - KISS ဘယ်အချိန်မှာစိတ်ဓာတ်မကျခဲ့ဘူး >
< start="98.667" dur="2.001"> KISS - သူသည် COMMONPLAC ဖြစ်သည့်တိုင်းပြည်အားအစေခံသည် >
< start="100.669" dur="0.833"> အစဉ်အမြဲမိမိနိုင်ငံကိုသစ္စာရှိရှိအမှုဆောင်ခဲ့သည်။ >
< start="101.536" dur="3.503"> သစ္စာရှိရှိ။ အကျိုးဆက်ကပြောပါတယ်တစ် ဦး >
< start="105.04" dur="1.934"> အကျိုးဆက်ကပြောတယ်ရှိသည်ဆိုပါကငြင်းပယ်ရန်တာဝန်ရှိသည် >
< start="107.009" dur="1.4"> သူ့ကိုအခြေမခံသောတိုက်ခိုက်မှုများကိုငြင်းပယ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ >
< start="108.443" dur="2.235"> သူ့ကို ON BASELESS တိုက်ခိုက်။ ငါဖို့ထောက်ပြချင်တယ် >
< start="110.712" dur="0.566"> ပရိသတ်ကိုထောက်ပြချင်တယ်။ >
< start="111.28" dur="2.167"> ပရိတ်သတ်။ အိုင်တီစိတ်ဝင်စားဖို့လှည့် >
< start="113.482" dur="1.901"> အိုင်တီအိုင်တီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လှည့်လည်အဲဒီမှာ။ >
< start="115.417" dur="3.002"> ယောဟနျအဲဒီမှာ။ သူသိတယ်သူအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် >
< start="118.453" dur="2.602"> သူအသိအမှတ်ပြုသူကယ်လီနှင့်အတူစိတ်ပျက်ခဲ့ပေမယ့်သူ >
< start="121.056" dur="3.536"> ကယ်လီနှင့်အတူစိတ်ပျက်အားငယ်ပေမယ့်သူကမသန်စွမ်းသူများကိုရည်ညွှန်းသည် >
< start="124.626" dur="1.1"> ဂျွန်ကယ်လီနှင့်အတူသဘောမတူသောသူတို့အားရည်ညွှန်းသည်။ >
< start="125.761" dur="3.035"> ယောဟနျကယ်လီနှင့်အတူ။ သူလှည့် CUTE အနည်းငယ်ကြည့်ပါ >
< start="128.797" dur="0.9"> သူလှည့်အထှေးလှည့်ကြည့်ကြည့်ပါအဲဒီမှာ? >
< start="129.731" dur="3.002"> အဲဒီမှာလုပ်? ဒီနည်းကို BS နှင့် NONSENSE IS >
< start="132.768" dur="2.601"> ဤသည်နက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်နှင့် THE ထံမှ BS နှင့် NONSENSE IS >
< start="135.371" dur="4.837"> နက်ရှိုင်းသောပြည်နယ်မှစ။ ငါ '' သော BUREAUCRACY >
< start="140.242" dur="0.266"> ငါမုန်းသော BUREAUCRACY တွင်ပါ။ >
< start="140.509" dur="1.868"> မုန်းတယ် သူတို့က WORD GAMES ကစားတယ် >
< start="142.411" dur="2.868"> သူတို့ကစကားလုံးဂိမ်းများကိုကစားသည်လူတိုင်းသည်ထူးခြားသောစကားတစ်ခွန်းဖြစ်သည်။ >
< start="145.281" dur="3.835"> လူတိုင်းသည်ထူးခြားသောစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သောအံ့သြဖွယ်, တစ် ဦး ကာကွယ်ရေး >
< start="149.118" dur="2.201"> သောအံ့သြဖွယ်, တစ် ဦး အတွက် operating KELLY ၏ကာကွယ်ရေး >
< start="151.354" dur="2.301"> သမ္မတကယ်လီအတွက်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နေသည် >
< start="153.689" dur="2.735"> သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိသောနည်းလမ်း။ >
< start="156.425" dur="2.502"> သူအမှုဆောင်ခဲ့သည်။ >> 63 သန်းအမေရိကန်မဲပေးကြသည် >
< start="158.928" dur="1.2"> >> သမ္မတ 63 သန်းအမေရိကန်မဲပေးကြသည်။ >
< start="160.163" dur="2"> သမ္မတအဘို့။ သူကနိုင်ငံခြားမူဝါဒချမှတ်။ >
< start="162.197" dur="3.737"> သူကနိုင်ငံခြားမူဝါဒချမှတ်။ မ CAREER တစည်း >
< start="165.967" dur="1.268"> တောင်မှစစ်မှုထမ်းမဟုတ်တောင်မှအလုပ်အကိုင် BUREAUCRATS တစည်း။ >
< start="167.236" dur="1.901"> ပင်စစ်မှုထမ်းမဟုတ် BUREAUCRATS ။ သူတို့ကျိန်ဆိုရန်ရှိသည် >
< start="169.138" dur="3.602"> သူတို့ခုခံကာကွယ်ဖို့ပြောရုံးခန်းယူကြပြီ >
< start="172.742" dur="1.6"> ပြောဆိုရန်ရုံးသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုခုခံကာကွယ်။ သူတို့အလုပ်လုပ်ကြသည် >
< start="174.343" dur="1.234"> ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သူတို့သည်သမ္မတအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ >
< start="175.611" dur="3.102"> သမ္မတ။ သူဘာလုပ်လုပ်သူတို့ချမှတ်တဲ့မူဝါဒ >
< start="178.714" dur="2.635"> သူဘာလုပ်လုပ်မူဝါဒချမှတ်ရန်သူတို့နောက်သို့မလှည့်ပါ >
< start="181.35" dur="2.768"> သူ့နောက်ကိုမလှည့်သင့်ဘူး >
< start="184.12" dur="2.835"> နှင့်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာဘာလဲ >
< start="186.99" dur="0.365"> နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကောင်စီဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ >
< start="187.356" dur="2.768"> ကောင်စီ DID ။ Lou: ရောဘတ်အိုဘရိုင်ယန်ရပ်နေတယ် >
< start="190.159" dur="3.202"> Lou: ရောဘတ်အိုဘရိုင်ယန်ဒီသတင်းကိုဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပါတယ် >
< start="193.396" dur="0.833"> ဒီနည်းကိုအဘို့အတက်လာဒီသမ္မတ, အလုပ်လုပ်။ >
< start="194.263" dur="2.201"> Hard ။ သမ္မတကယ်လီအပေါ်နှစ်ဆ၊ >
< start="196.465" dur="3.369"> သမ္မတအတွက်ကယ်လီအပေါ်နှစ်ဆယ့်တစ်မျိုး၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဒီနည်းကိုချနိုင်ခဲ့တယ် >
< start="199.835" dur="2.335"> ငါတို့အဘို့ဤချထားနိုင်လျှင်။ >
< start="202.171" dur="2.201"> ပရိတ်သတ်။ ငါဂျွန်ကယ်လီအဆုံးသတ်ခဲ့သည် >
< start="204.407" dur="2.568"> ငါ John KELLY အဆုံးသတ်သောအခါငါအလျင်အမြန်မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး။ >
< start="206.976" dur="3.069"> ငါအလျင်အမြန်မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး။ သူအပြည့်အဝသိတယ်သူလမ်း >
< start="210.079" dur="6.806"> သူသည်အပြည့်အဝသိတယ်မိမိလမ်းကိုကျော်မိမိလမ်းပေါ်မှာမိမိခေါင်း။ >
< start="216.919" dur="2.902"> သူ၏ ဦး ခေါင်းကိုကျော်။ ဤသူကားအဘယ်သူသမ္မတ >
< start="219.856" dur="2.835"> ဤသူသည်မကြာသေးမီကပြောကြားခဲ့သည့်သူ၏အကြီးမားဆုံးသောနောင်တဖြစ်သည် >
< start="222.692" dur="0.566"> မကြာသေးမီကသူ၏အကြီးမြတ်ဆုံးနောင်တရပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="223.259" dur="4.737"> ဝန်ထမ်း AND ငါသူကြီးစဉ်းစားပါ >
< start="227.997" dur="1.767"> ငါသူသည်ကြီးမြတ် Self- အသိပညာနှင့်အသိပညာရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ် >
< start="229.766" dur="0.933"> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုမိနှင့်ဤစကားကိုပြောရန်အသိပညာ။ >
< start="230.7" dur="2.301"> ပြောပါ။ >> ငါတို့အကူးအပြောင်း၌ရှိကြ၏ >
< start="233.036" dur="1.6"> >> ငါတို့အသွင်ကူးပြောင်းမှု၌ရှိကြ၏အခါအစောပိုင်းနေ့ရက်ကာလ၌ >
< start="234.671" dur="0.9"> အကူးအပြောင်း၏အစောပိုင်းနေ့ရက်များ။ >
< start="235.572" dur="2.201"> ကူးပြောင်းရေး။ ငါသူတို့သဘောပေါက်မစဉ်းစားပါနဲ့ >
< start="237.774" dur="4.637"> ငါသူတို့လမ်းလျှောက်သွားနေကြသည်ကိုမြင်ဘူဇသူတို့သဘောပေါက်လာတယ်ထင်ကြဘူး >
< start="242.412" dur="0.966"> BUZZ သူတို့သွားကြသည်ကိုမြင်လျှင်သို့လမ်းလျှောက်။ >
< start="243.38" dur="3.735"> ထဲသို့။ သူနဲ့တူတယ် >
< start="247.117" dur="0.866"> ကျနော်တို့ ALIEN ကျူးကျော်စစ်တပ်ကဲ့သို့ဆက်ဆံခဲ့သည်။ >
< start="247.985" dur="3.435"> တပ်မတော်ကျူးကျော်။ Lou - ဒီနည်းလမ်းကိုဘယ်သူကကုသပေးခဲ့တာလဲ။ >
< start="251.421" dur="1.968"> Lou - ဒီနည်းလမ်းကိုဘယ်သူကကုသပေးခဲ့တာလဲ။ >> ဝါရှင်တန် BUREAUCRACY ။ >
< start="253.39" dur="4.236"> >> ဝါရှင်တန် BUREAUCRACY ။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ။ >
< start="257.661" dur="2.601"> အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ။ Lou - မင်းပြောနေတာ >
< start="260.296" dur="1.801"> LOU: သင်ကအဖြူရောင် ၀ န်ထမ်းတွေကိုပြောနေတယ် >
< start="262.098" dur="0.299"> အဖြူရောင်အိမ်ပါ ၀ န်ထမ်းများရုံး။ >
< start="262.399" dur="3.135"> အိမ်။ >> အမြဲတမ်း BUREAUCRACY >
< start="265.535" dur="1.601"> >> မီးသို့မဟုတ်ပင်မရနိုင်သောအမြဲတမ်းEAရာဝတီ >
< start="267.137" dur="0.599"> မီးသို့မဟုတ်ပင်လွှဲပြောင်းနိုင်သလား။ >
< start="267.771" dur="1.467"> လွှဲပြောင်းခြင်း။ သူတို့ကသမ္မတကြည့်ရှုခြင်းနှင့် >
< start="269.239" dur="1.968"> သူတို့ကသမ္မတကိုကြည့်ပြီးပြောပါမယ် >
< start="271.241" dur="1.3"> သင်ဒီမှာပြီးနောက်ကြာလိမ့်မယ်ပြောပါ။ >
< start="272.576" dur="1.734"> သွားပြီ Lou - သူတို့ဖြစ်နိုင်မယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိလိမ့်မယ် >